Agba motifs na a mbụ Crosswalk na Turkey | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaAgba motifs na a mbụ Crosswalk na Turkey
08 / 11 / 2019 54 Sakarya, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
agba mara mma iji mepụta mmụta na ụzọ ụkwụ ji ụkwụ aga
Mpempe ndị mara mma na Igha ụkwụ ụkwụ; Obodo Sakarya nke mepere emepe emeela ihe ọhụrụ nke ga-eme ka ụmụaka mara omume nke ịgafe ndị ji ụkwụ agafe. na-agafe agafe crossings na-arụ ọrụ ndị na-ebu ụzọ ụdị ke Turkey na-onwem na yi motifs na egwuregwu nhazi.
Ọrụ ndị Ngalaba Na-ahụ maka fficgbọ okporo Ọhụụ nke Sakarya Metropolitan nke alitygbọ njem iji mee ka ndị mmadụ mara banyere ndị njem na-agafe. Na a na-ekwu, Turkey ulo oru n'ozuzu 'mbụ ụkwụ' mgbe ngo ugbu a bịanyere aka a ịrịba oru ngo ga-adọta uche nke ụmụ e. Ada Park na ụmụ ama egwuregwu na-abụghị ọhụrụ na-agafe agafe walkway bụ a mbụ ya na Turkey. Ugwu a, nke e wuru na Europe na mba dị iche iche na ebumnuche banyere ime ka ndị mmadụ mara na ha kwesịrị ịkpachapụ anya na okporo ụzọ.
a mbụ na Turkey
Na nkwupụta nke Ngalaba Na-ahụ Maka fficgbọ okporo Anụmanụ mere, “Ebumnuche ya bụ ime ka ụmụ amaala mata ọhụụ ma dọta uche nke ndị ọkwọ ụgbọ ala site n'ịmụ akwụkwọ ndị a n'ọtụtụ mba dị iche iche gburugburu ụwa. N'ala anyị, ndị otu anyị egosipụtala egwuregwu na-agbakwunye ụcha na ndụ ụmụ anyị na mmụọ nke onye na-ese ihe. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-eburu a mbụ ya na Turkey; ourmụ anyị maara nke ọma n'okporo ụzọ, na-akpachapụ anya ma na-achọkarị iji ụkwụ ndị ọzọ. Ọrụ a rụrụ n'ihu ebe ụmụaka na-eme egwuregwu Adapark ga-eme ka ụmụ anyị mara ihe ”.
Mara curelọ Ahịa: nweta: Dị na Eskişehir-İnönü High Speed ​​Line…
Anwụchaghị mkpụkpọ ụkwụ Konya-Karaman…
Na-eme ka oge na-aga n'ihu na EGO Bus ... Gaa, nwa m ...
Ngosipụta ngosi nke 23 na April na Gebze K @ BİN
A mbụ Uçakbüs njem ndị mmadụ merela Amalite na Turkey
Konya na Turkey na Barrier-Free Transportation System ...
Mara Prozụta Ihe: Sivas-Kayseri Line Km600 + 200'da Sivas…
Okporo ụzọ na -elezi agba ka okporo ụzọ Malatya dị otu Bir
Ihe Oru Na-enyere Aka Idozi na Kocaeli Otu Otu…
A Ganja na India Live Hit Train
Ọrụ mbụ nke ndị njem
Ụzọ ndị njem
Ima banyere ije ije